Rohingya Students Forum: ဖုန်းနဲ့စာရိုက်ခြင်း(Texting) ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်စေနိုင်
ဖုန်းနဲ့စာရိုက်ခြင်း(Texting) ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်စေနိုင်
ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်မှာ ဆက်တိုက် စာရိုက်ခြင်း(Texting) နဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးနေတာကို သင်အာရုံနောက်မိပါသလား။ အာရုံနောက်တာထက် စိတ်ပူပေးဖို့ ပိုလိုအပ်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေကို ပဲ အချိန်တိုင်းကြည့်နေတတ်တဲ့ လူငယ်လေးတွေဟာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အဓိက ပြဿနာ ဖြစ်စေတာကတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ မက်ဆေ့ဂ်ျပို့ဖို့ စာရိုက်ခြင်းနဲ့ Chat အသုံးပြုနိုင်တဲ့ လူမှုမီဒီယာ App တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှု အသစ်တစ်ခုက ဖော်ပြလိုက်တာက သူတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေကိုပဲ အချိန်တိုင်း ကြည့်နေတတ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ အိပ်ချိန်တွေ ကျော်လွန်လာတတ်ပြီး ၊ အိမ်စာ တွေလုပ်ဖို့ ရှုံးနိမ့်ကာ အမြဲတမ်း ဖုန်းပေါ်မှာ စာရိုက်နေသူ(Texter) တွေသာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေခြင်းဟာ နိမ့်ကျတဲ့ လူနေမှု ဘ၀တစ်ခုကို သာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ပိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
Psychology of Popular Media Culture ဆိုတဲ့ အမေရိကန် အွန်လိုင်းဂျာနယ်မှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လေ့လာမှု တစ်ခုဟာ လူမှုမီဒီယာ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှု နဲ့ ကျောင်း ပညာရေး နိမ့်ကျနေမှု ကြားက ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေမှုကို အတည်ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ဆာဗေး ကောက်ယူမှုတစ်ခု ကနေ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေ Facebook မှာ အချိန်ကုန်တာများလာလေလေ ၊ သချာင်္ဘာသာရပ်မှာ ညံ့လာလေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်စာလုပ်နေချိန်မှာ ဖုန်းနဲ့ စာရိုက်နေသူတွေဟာလည်း ပညာရေးမှာ နိမ့်ကျနေတတ်ကြပါတယ်။ စာသင်ချိန်မှာ အဲဒီလို စာရိုက်နေသူတွေဟာ သင်ခန်းစာ အသေးစိတ်ကိုလည်း မသိရှိကြသလို သင်ခန်းစာ ကို မှတ်မိခြင်းလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အချိန်တိုင်း ဖုန်းနဲ့စာရိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေဟာ အိပ်ချိန်မှာလည်း ပြဿနာ ရှိပါတယ်။ အမေရိကန် သတင်းတင်ပြချက်တစ်ခုမှာတော့ ဆယ်ကျော်သက် ၃ ပုံ ၁ ပုံဟာ ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းလ် ဖုန်း ကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး ထိုလူငယ်တွေထဲက ၁၀ ယောက်မှာ ၆ ယောက်ဟာ နေ့စဉ် ဖုန်းနဲ့ စာရိုက်နေသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် ဖုန်းပြောချိန် ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန် (သို့) အီးမေးလ် အသုံးပြုချိန်တွေထက်ပိုများနေပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေ နေ့စဉ်ပျမ်းမျှ ပို့နေတဲ့ မက်ဆေ့ဂ်ျ အစောင်အရေအတွက် ဟာ တစ်နေ့ကို ၆၀ ခန့်ရှိနေပါတယ်။ အသက်နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ တစ်နေ့ကို မက်ဆေ့ဂ်ျ အစောင် ၁၀၀ လောက်ပို့နေကြပြီး ယောကျာင်္းလေးတွေကတော့ တစ်နေ့ကို အစောင် ၅၀ လောက်ပို့နေကြပါတယ်။
ဖုန်းနဲ့ စာရိုက်ခြင်းကနေ အဓိက ဖြစ်ပွားစေခဲ့တာကတော့ အာရုံစိုက်နေခြင်းကို လျှော့ချလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ စာသင်ခန်းထဲမှာ ဖုန်းနဲ့စာရိုက်ခြင်းက ပညာရေး နိမ့်ပါးမှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာ အံ့သြစရာတော့မရှိပါဘူး။ ဗြီတိန်နိုင်ငံက နောက်ဆုံးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ လေ့လာမှုအရတော့ လူမှုမီဒီယာ မှာ အချိန်ဖြုန်းတာများတဲ့ အသက် ၁၀ နှစ်ကနေ ၁၅ နှစ်ကြားဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးကတော့ စိတ်ဖိစီးမှု ၊ မောပန်းနွမ်းနယ်မှု နဲ့ အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Rohang king at 8:21 AM
ရခိုင်ဒုက္ခသည် နောက်ဆုံး အသုတ် နေရာချမည်2015-11-29စ...
The Stunning Home Of Sunil Shetty – 14 Photos Of S...
Obama accepted $1.3mn in gifts from Saudis in 2014...
Facebook တွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် အချုပ်သားများအား နှိပ...
UNECA တွင် အလံလွှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ပါလက်စတိုင်းနိုင်...
တ.က.သ၊ ဗ.က.သ ဥက္ကဌ ဦးရာရှစ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၉၁၂ – ၁၉၇၈...
ဒေါက်တာ အေးချမ်းဆိုသူ ဖက်ဆစ်တစ်ဦး ဖတ်ရန် နိုဘယ်လ်...
WHAT NEXT FOR MYANMAR?
အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန်၏ 2016 ပြက္ခဒိန်ထွက်ပြီ
নিজ দেশে ফিরে যেতে আগ্রহী রোহিঙ্গারা : সংবাদ সম্মে...
Report Reveals, Of The 415 Million Indians Who Nev...
Zindegir Sakkai (ရေးသူ- လူထုဝဏ္ဏ)
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဥ...
ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ၊ အပိုင်း (၄ - ဇာတ်သိမ်း)
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှ ယနေ့ထက်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင်သေ...
OIC အမည်ခံကာ အစ္စလာမ်ဘာသာအား စော်ကားသူ ဗုဒ္ဓသားတော်မ...
SALT MAGAZINE 100 INSPIRING WOMEN'S LIST
မင်္ဂလာအမြှောက်တပ်မှူးကြီး‬ မြန်မာမွတ်စလင် ဦးဘိုးကာ...
မြေဧက ဖွဲ့ နည်း တွက်နည်း
ရတနာပုံမန္တလေးနန်းတွင်းထဲက ရွှေပန္နက်ဗလီ ကိုလည်း ရည်ရ...
I Converted To Islam From Hinduism, And Suddenly, ...
ရခိုင်ကုလား သို.မဟုတ် ရိုးဝန်ညှာလူမျိုးများ" ဆောင်...
ميري بيٹي شيركي طرح دنياسے رخصت هوئ
ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ၊ အပိုင်း (၃)
Myanmar Muslims jailed over printing 'Rohingya' ca...
မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစ...
သမ္မတလုပ်ရန် အများကဆန္ဒရှိနေသော်လည်း အသက်အရွယ်အရ မလု...
Wi-Fi ထက် ပိုမြန်သည့် Li-Fi စနစ် လာတော့မည်
ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ၊ အပိုင်း (၂)
ဖုန်းနဲ့စာရိုက်ခြင်း(Texting) ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို...
တိုက်လေယာဉ်ပစ်ချခံရမှု တူရကီကို ရုရှားအပြစ်တင်
Myanmar court fines5men for printing ‘Rohingya c...
Khan, now Aamir Khan courts controversy by talking...
ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ၊ အပိုင်း (၁)
ကလေး ခြေထောက်ခွင်ခြင်း (bowlegs)
ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲအတွက် သမ္မတဦး...
တညင်းသီး(ခေါ်) အညင်းသီးသည် စားစရာ မဟုတ်ပါ
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကြိုးေ...
အရိုက်ကြမ်းတဲ့အမက (၅)ဒဂုံအရှေ့ ပထမတန်း သင်တဲ့ဆရာမ
ရှေးခေတ်မြန်မာ မွတ်ဆလမ်တို့၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ
ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ရ ဘော်လီဝုဒ်နာမည်ကျော် မင်...
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ မတ်စ်နူးန် ဒိုအာများ pdf
သမ္မတအိုဘားမား မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်ကလေးတွေနဲ့ တွေ...
အားကြ အတုယူဖှယျ အမြိုးသမီး ၁၀၀
Delhi boy gets Rs 1.27 crore offer from Google
ကျွန်တော် ဘာကြောင့် အစ္စလာမ်သို့ပြောင်းရခြင်း ( Emm...
ကျနော် မွတ်စလင်ပါ၊ ကျနော် အကြမ်းဖက်သမား မဟုတ်ပါ၊
Obama will meet with refugees in Malaysia, White H...
Aung San Suu Kyi: ‘I’m going to be the one who is ...
Escape to freedom How five young refugees are adju...
ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နိုင်လို့ ပျော်တဲ့ ခရိုနီ
ဟဒီးစ်တော် လေးဆယ် pdf စာအုပ်
သမ္မတ အိုဘားမား မလေးရှားသို့ ရောက်ရှိပြီး ပထမဆုံး လ...
အာဏာချောမွေ့စွာ လွှဲပြောင်းမပြောင်း စောင့်ကြည့်ရန် ...
ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် ကုလတောင်းဆို
မင်းတုန်းမင်းကြီးက အီစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အတွက် မက္ကာဟ်ရွြှေ...
From Somali refugee to Canadian MP
ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိူးပြုန်းကြံစည်နေကြောင်း အထောက...
A tale of two Sittwes
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးမောင်မောင်အုန်း အနိုင်ရသော်လ...
ပြည်သူချစ်သော ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦ...
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တတိယကော်မတီ...
Bangladesh, one of the safest countries on Earth: ...
မေတ္တာကို အခြေခံသည့် နိုင်ငံရေးမျိုး လုပ်ကြည့်လိြုေ...
ရိုပြက္ခဒိန် ၂၀၁၆ (Diindahání)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်ရပ်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ ကမ္ဘာ ဒီမိုက...
“အာဏာသိမ်းပါလို့ လူပုံအလည်မှာ ပြောတာကို ဦးသိန်းစိ...
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ ဒုက္ခသည်စခန်းက ရိုဟင်ဂျာ...
Russian Plane Downed in 'Terror Act'; Vladimir Put...
Myanmar: UN General Assembly Resolution still Need...
Election losers can still make laws in Burma for 2...
A Historic Moment with President Obama and Team
British women who survived Paris terror attacks sa...
ပျော်ရွှင်လေ့လာ အင်္ဂလိပ်စာ (၃): ဖို-မ စကားလုံး
အာရ်ကာန် နိုင်ငံတော်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း
မွတ်စလင်များအား Facebook မှ စော်ကားသည့် အလှပြင်ဆို...
ရဲများက အိမ်တွင် ဝင်ရောက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း ပြုလု...
Tomorrow အမုန်းတရားဖြန့်ဖြူးနှာရာ စာမျက်သစ်
Egyptian passport found at Paris
Uncertainty looms for Myanmar's Muslims
Burma will regret shutting its eyes to the fate of...
Shwe Maung (Myanmar Parliament) - Myanmar and the ...
Enemy of Enemies: The Rise of ISIL
﻿ရိုဟင်ဂျာ... လူမျိုးရေးလား၊ ဘာသာရေးလား...
ပါရီမြို့ တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်...
LESS FOR ROHINGYA
Rohingya Federation of Arakan
The Rohingyas: Searching forahome — Report from ...
နိုင်ငံတော်ဘာသာကို ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုပြုလုပ်ရန် ကြံစဉ်...
Spanish court issues arrest warrants for Netanyahu...
ပဲရစ်တိုက်ခိုက်မှု သူတို့ လက်ချက်လို့IS ဝန်ခံ